ABOn Oromoodha;Oromoon ABO dha. – YEROOBLOG
ABOn Oromoodha;Oromoon ABO dha.
Yerooblog	Politics	 September 19, 2014 December 25, 2015 3 Minutes
Uummanni Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) baay’ee jaalata. Oromoo ta’ee ABO kan balalesatu arguun nama dhiba. Dhugaadha, miseensonni Dhabbata Dimookiraatawaa Uummatta Oromoo (DHDUO) ABOtiin nibalaaleffatu; ni jibbus. Deeggartoonni fi miseensonni DHDUO ABO yoo jibban nama hindhibu. Sababni isaas DHDUOn dhaabbata of danda’e dhaabbachuu danda’u miti. Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayi (TPLF)tu isaan dhaabe.
Kaayyoon DHDUO uummata Oromoo bakka bu’uu miti. Kaayyoon isaanii uummata Oromoof qabsaa’u miti. Isaan ergamtoota. Ofii yaaduu hindanda’an. Ofis hinbeekan. Maqaatiin Oromoo bakka buuna jedhu malee, isaan uummata Oromoo bakka bu’uu hindanda’an. Isaan fedhii gooftota isaanii guutuuf uummata Oromoo dura kandhaabbatanidha. Hojiin isaanii uummata Oromoo qabeenya isaa saamsisuudha. Waggota digdaman darbaniif, DHDUOn uummata Oromoo hiisisaa, ajjesisaa, lafa isaarraa isa buqqisiisaa fi qabeenya isaa saamsisaa turan. Ammas kanumatti jiru. Uummanni Oromoos, DHDUOn dhaabbata Oromoo bakka bu’uu ta’uu akka hin dandeenye sirriitti ni beeka. Jibba isaanii qabus karaa adda addaa ibsachaa tureera.
Uummanni Oromoo, dhabbanni dhugaan uummata Oromoo bakka bu’uu danda’aa, mirga Oromoos ni kabachiisa jedhani amanan Adda Bilisummaa Oromooti. ABOn bara 1970mootaa jalqabee qabsoo Oromoo adda durumman gaggeessaa kan turedha. Mootummaan abbaa irree Darguu, Itoophiyaa waggoota 17 kan bulche, kuffisuu keessatti ABOn shoora oolaana taphateera. Kufaatii Darguun booda, Mootummaa Ce’umsaa Itoophiyaa keessatti hirmachuu danda’eera. Yeroo sanatti dhaabbanni siyaasaa Adda Dimookiraatawaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa (ADWUI) ciminaan morkataa kanture ABO dha.
Garuu, ABOn mootummaa ce’umsaa keessa yeroo gabaabaaf ture; ji’a saddeeetiif qofa. ABOn fudhatama inni yeroosanatti uummata Oromoo biratti argate hiriba kan isaan dhowwe warri ADWUI, karaa DHADUO miseensotaa fi deeggartoota ABO irratti duula bananii, ABOn akka Oromiyaa keessa socho’ee sagantaa isaa uummata Oromoo akka hinbarsiifannee danqaraa itti ta’an. Miseensota ABO ajjeesuu, hidhuu fi dararuu jalqaban. Haalli kun daran dabalaa waan deemeef ABOn mootummaa ce’umsaa lakkisee ba’uuf dirqame. Karaa nagaatiin mirga uummata Oromoo kabachiisuu akka hindan’amne waan hubateef, ammas qabsoof gara bosonaatti dacha’e.
ABOn kaayyoo Oromiyaa bilisoomte hundeessuuf qabsoon taasise galma ga’uu baatus, uummata Oromoof bu’aa gurguddoo heddu buuseera. Afaan Oromoo, afaan barreeffama hinturiin akka inni afaan barreefamaa ta’u godheera. ABOn, qubee Afaan Oromoo bara 1978 kaasee ofii barreeffamaaf itti fayyadamaa ture, uummatni Oromoo itti fayyadamu akka danda’u taasiseera. Yeroo mootummaa ce’umsaa keessatti hirmaata ture, ABOn beektoota afaanii konfiransii guddaa qopheesuun qubee Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti afaan barumsaa fi afaan hojii akka ta’u murtoo guddaa dabarse. Yeroo sanatti ministeera barnoota kanturan Obbo Ibsaa Guutama kitaabni Qubee Afaan Oromootiin maxxanfamanii hojiirra akka oolu taasisan. Dhugumaatti kun, hojii seenaa qabeessa ABOn uummata Oromoof taasise dha.
ABOn, hacuucaa fi gabrummaan uummata Oromoorra waggaa dhibbaaf ture akka inni irra ka’u taasiseera. Sabboonummaa fi uffitti amanumman uummata Oromoo keessatti akka dagaagu kan godhe ABO dha. Mootummaan feederaalaa Itoophiyaa keessatti akka uumamu kan godhee fi Keeyyanni 39 heera biyyiti keessatti akka taa’u kan godhe ABO dha. Yeroo sanatti kaayyoon ABO Oromiyaa bilisoomte dhaabbachuu waan ta’eef, warri ADWUI, yoo mootummaa tokkummaa yoodhaabuu yaalan, uummanni Oromoo ABO wajjin hiriira jedhani waan sodaataniif, mootummaa feederaalaa hara’a jiruu kan dhaabuuf dirqaman. Namoonni baay’een mootummaa feederaalaa afaan irratti hundaa’e kana, mootummaan ADWUI kan fide itti fakkaata; garuu dhugaan jiru isa miti.
Uummanni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf yeroo hundaa ABOff jaalala fi kabaja guddaa qaba. Kana immmoo DHADUO fi ADWUIn sirriitti beeku. Kanaaf, fudhatama ABOn uummata Oromoo biratti qabu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetaniif. Yeroo hundaa ABOn shoror keessaa akka ta’e, uummata Oromoos ta’e uummata bira akka qalu; sirna darbe (sirna abbaa lafaa) deebisuu akka barbaadu fi kkf hololuun uummaanni Oromoo akka ABO jibbu waggoota digdamman darbaniif hojjechaa turaniiru. Garuu, uummata Oromoo gara offiitti deebisachuu hindandeenye. Uummanni Oromoo yeroo hundaa ABO akka abdiisaatti ilaala; cunqursaa, hacuuccaa fi saamichaa irra ga’aa jiru kana ABOtu narraa deebisa jedhee amana.
Dargaggoonni Oromoo carraa argataniin ABO yeroo deeggaran fi leelissan arguun kan barame dha. Mootummaan ADWUI dargagoota Oromoo nuun dhiistanii maaliif ABO deeggartu jechuudhaan gara mana hidhaatti guura, ni darara, ni ajjeessa akkasumas akka biyyaa bahan godha. Kana hundaa godhullee, Oromoota gara ofiitti deebifachuu hindandeenye. ABOn qabsoon gochaa jiru laafullee, uummanni Oromoo, ammayyuu abdii hin kunne…guyyaa tokoo ABOn tokkoomee, jabaatee, cimee uummata kana bilisa akka isa baasu abdata. ABOn Oromoodha;Oromoon ABO dha.
Published September 19, 2014 December 25, 2015
Previous Post ETV TO EBC? CHANGING NAME IS NOT ENOUGH!
Next Post BECAUSE I AM OROMO: A REPORT BY AMNESTY INTERNATIONAL